မောင်လေးဖြစ် သူ ရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲ ကို သွားရောက် အားပေးခဲ့တဲ့ “သင်ဇာဝင့်ကျော်” – Zartiman
Zar Ti Man | July 7, 2020 | Celebrity | No Comments
သင်ဇာကတော့ “ အနိုင် နဲ့ အရှုံး နှစ်မျိုး ပဲရှိတယ် … ယှဉ်ပြိုင်ချင်း သာအဓိကပါ … ရှုံးသွားလဲ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ဆက်ကြိုးစားပါ … ပထ မဦးဆုံး အတွေ့အကြုံဆိုတော့လဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ … အတွေ့အကြုံ ကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ ငါ့မောင်လေး … Whatever u didagreat job, keep fighting !!!🦾Always support u 🖤🖤”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် မောင်ဖြစ်သူ အတွက် အားပေး စကားဆိုခဲ့တဲ့ သင်ဇာ ရဲ့အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
ပရိသ တ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အောင်မြင်မှာများစွာနဲ့ အနုပညာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။သူမကတော့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အပြင် အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာတာကြောင့်လည်း ပုရိသတွေ ရဲ့သဲသဲလှုပ်အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရသူတစ်ဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အားကစားလိုက်စားသူဖြစ်တာကြောင့် GYM ပုံမှန်သွားကာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အမြဲမပြတ်လုပ်လေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျေ်ာက သူမလိုမျိုးအားကစားလိုက်စားတဲ့ မောင်လေးဖြစ်သူရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲ ကို သွားရောက်ဝန်းရံခဲ့ပြီး ရှုံး သွားလည်း စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဆက်ကြိုးစားဖို့ စိတ်ခွန်အားတွေပေးခဲ့ပါတယ်။
Source- ThinZar Wint Kyaw
မောငျလေးဖွဈ သူ ရဲ့ လကျဝှပှေဲ့ ကို သှားရောကျ အားပေးခဲ့တဲ့ “သငျဇာဝငျ့ကြျော”
သငျဇာကတော့ “ အနိုငျ နဲ့ အရှုံး နှဈမြိုး ပဲရှိတယျ … ယှဉျပွိုငျခငျြး သာအဓိကပါ … ရှုံးသှားလဲ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့ ဆကျကွိုးစားပါ … ပထ မဦးဆုံး အတှအေ့ကွုံဆိုတော့လဲ ဒီလောကျတော့ ရှိမှာပေါ့ … အတှအေ့ကွုံ ကနသေငျခနျးစာယူနိုငျပါစေ ငါ့မောငျလေး … Whatever u didagreat job, keep fighting !!!🦾Always support u 🖤🖤”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါ တယျ။ပရိသတျကွီးအတှကျ မောငျဖွဈသူ အတှကျ အားပေး စကားဆိုခဲ့တဲ့ သငျဇာ ရဲ့အကွောငျးလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…။
ပရိသ တျကွီးရေ သရုပျဆောငျသငျဇာဝငျ့ကြျော ကတော့ အောငျမွငျမှာမြားစှာနဲ့ အနုပညာလမျးကို လြှောကျလှမျးနသေူတဈဦး ဖွဈပါ တယျ။သူမကတော့ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာရိုကျကူးခဲ့တဲ့အပွငျ အမိုကျစားကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတာတာကွောငျ့လညျး ပုရိသတှေ ရဲ့သဲသဲလှုပျအားပေးဝနျးရံခွငျးကို ခံနရေသူတဈဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော ကတော့ အားကစားလိုကျစားသူဖွဈတာကွောငျ့ GYM ပုံမှနျသှားကာ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ အမွဲမပွတျလုပျလရှေိ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျလညျး သငျဇာဝငျ့ကျြောက သူမလိုမြိုးအားကစားလိုကျစားတဲ့ မောငျလေးဖွဈသူရဲ့ လကျဝှပှေဲ့ ကို သှားရောကျဝနျးရံခဲ့ပွီး ရှုံး သှားလညျး စိတျဓာတျမကဘြဲ ဆကျကွိုးစားဖို့ စိတျခှနျအားတှပေေးခဲ့ပါတယျ။
Covid ကြောင့် ရပ်ရွာအကျိုးသယ်ပိုးတတ်သူ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ကြွေလွင့် ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဂရေဟမ် ယူကျုံးမရဖြစ်နေ
ကိုယ်လုံးလေးကို လှုပ်ခါပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ကပြလိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပြသလိုက်တဲ့ အမရာငြိမ်း
ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေ နဲ့ ပိုစ့်ပေးနေ တဲ့ အချစ်တော်မလေး ခန့်